काँग्रेस 'जागरण अभियान' मा जान गच्छदारले रोकेपछि..
२०७६ भदौ २६ गते १३:२०
काठमाडौं । तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरम नेपाली कांग्रेसमा समायोजन भएको दुई वर्ष भइसकेको छ । लोकतान्त्रिक फोरमलाई कांग्रेसमा समायोजन गर्न उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको छ । कार्यदलले कछुवाको गतिमा काम गर्दै आएको छ । दुई वर्षसम्म पनि लोकतान्त्रिक फोरमका नेता कार्यकर्तालाई कांग्रेसमा समायोजन गर्न नसक्दा कार्यकर्तामा निरासा छाउनु स्वभाविक हो । नेपाली कांग्रेसमा विजयकुमार गच्छदार मा ... read more...
बाबुरामको छेडछाडः 'घरबेटीले मेलम्ची ठेक्का पाए, अब प्रचण्डजी ढुक्क'
२०७६ भदौ २६ गते ११:२८
काठमाडौं । करोडौं, अर्बौंको काम लिने तर कुनै काम समयमा सम्पन्न नगर्ने काम चोर ठेकेदारका रुपमा परिचित विवादास्पद निर्माण ब्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का पाएपछि डा. बाबुराम भट्टराईले पनि ट्वीट गरेका छन् । उनको ट्वीट भने नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई लक्षित छ । डा. बाबुरामले ट्वीटमार्फत भने,'घरबेटी अधिकारीज्यूले मेलम्चीको ठेक्का पाएसँगै प्रचण्डजीलाई प ... read more...
नोट दिएर भोटको चलखेल, १ करोड दान कि सापटी ?
२०७६ भदौ २६ गते १०:४५
काठमाडौं । गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नवौं निर्वाचनको तिथि मिति तोकिएको अवस्थामा अध्यक्षका प्रत्यासी कुमार पन्तले अध्यक्ष भवन भट्टको आग्रहमा संस्थालाई १ करोड रुपैयाँ दिएपछि विवाद चुलिएको छ । सामाजिक सञ्जालभर नोट दिएर भोट किन्न खोजेको भन्दै पन्तको ब्यापक आलोचना सुरु भएको छ । कतिपयले उनको अवैध क्रियाकलापमाथि रोक लगाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । उता एनआरएन अध्यक्ष भट्टले भने १ करोड सहयोग गरेकोमा ... read more...
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको भाृत संगठन नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष जीतजंग बस्नेत र महासचिव भूपेन्द्रजंग शाहीबीच कार्यगत मतभिन्नता आएपछि लफडा सुरु भएको छ । विगत ३ बर्षदेखि मिलेर काम गर्दै आएको चार सदस्यीय तरुण दलमा एक्कासी अध्यक्ष बस्नेत र महासचिव शाहीबीच फुट आएको हो । तरुण दलका महासविच शाहीले भने भ्रष्टाचारका विषयमा देशब्यापी कार्यक्रम गरौं भन्दा अध्यक्ष बस्नेतले सधैं टार्दै आएकोले बाध्य भएर महासचिवक ... read more...
काठमाडौं । वीपी कोइरालाको १०६ औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर नेपाल विद्यार्थी संघले बृक्षारोपण कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । सो अवसरमा सुन्दरीजलस्थित रहेको वीपी संग्रहालय परिसरभित्र १०६ वटा कपुरको बृक्ष रोपिएको थियो । संग्राहलयका अध्यक्ष परशुराम पोखरेलको सभापतित्व र नेपाली काँग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै नेता पौडेलले भने,'वीप ... read more...
धेरै गुनासो र आलोचना: जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री
२०७६ भदौ २४ गते १०:०९
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्का सदस्य परिवर्तनको तयारी गरेका छन् । मन्त्रीहरूसँग गरेका करार सम्झौताका आधारमा कार्यमुल्यांकन गरी मन्त्री फेर्न लागिएको हो । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो संकेत देखाएका हुन् । आगामी सातासम्म कार्यप्रगतिको विवरण ल्याउनका लागि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको स्रोतले जनायो । सरकारको काम कारबाहीको गुनासो, आलोचना ज्य ... read more...
'ओली-प्रचण्ड' निकटताले पार्टीभित्रैका शत्रुलाई त्रास
२०७६ भदौ २४ गते ०९:३८
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इपिसेन्टर (केन्द्रविन्दु) पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बनेका छन् । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएको सहमतिअनुसार पार्टीको नेतृत्वको जिम्मा प्रचण्डले लिएका छन् । सरकार सञ्चालनको जिम्मा भने ओलीलाई नै छाडेर ‘आलोपालो’ को विषयलाई नउचाल्ने सहमति पनि भएको छ । पार्टीका अन्य नेताले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीको सपना देखिरहेका बेला ओली-प्रचण्डबीच यस्तो ... read more...
मुलुकमा ब्याप्त भ्रष्टाचार विरुद्ध भण्डाफोर अभियानमा तरुण दल
२०७६ भदौ २३ गते ०९:१४
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल तरूण दलले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउने घोषणा गरेको छ । तरूण दलले मुलुकमा ब्याप्त भ्रष्टाचार विरुद्ध वडादेखि केन्द्रसम्म अभियान चलाउने विज्ञप्तिमार्फत जनाएको हो । तरुण दलले ‘भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल, सुशासनयुक्त नेपाल’ नाराका साथ अभियान केन्द्रदेखि वडासम्म चलाउन लागेको हो । महासचिव भूपेन्द्रजंग शाहीले स्थानिय निकायदेखि केन्द्रसम्म हुने भ्रष् ... read more...
लोहनीको दबदबा बढेपछि पार्टीबाटै निकालिए राणा पक्षका नेता
२०७६ भदौ २२ गते १३:०३
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) को १९ र २० गते सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैंठकको कार्यपत्र लेखनकर्ता पुष्करकुमार अधिकारीलाई पार्टीबाटै निकालिएको छ । पार्टीका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले नुवाकोटकै भएर पनि अर्का अध्यक्ष पशुपति सम्सेर राणाको नजिक भएकै कारण अधिकारीलाई निष्कासन गरेको आरोप लागेको छ । निष्कासनपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अधिकारीले आफू डा. लोहनीको पहिलो शिकार भए ... read more...
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ नेपालको तीन दिने भ्रमणमा आउँदै
२०७६ भदौ २२ गते ०९:५८
काठमाडौं । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी आज नेपालको तीन दिने भ्रमणमा आउँदैछन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको औपचारिक निमन्त्रणामा वाङ नेपाल आउन लागेका हुन् । उनको भ्रमण टोलीमा १९ सदस्य रहने बताइएको छ । वाङलाई परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उनको नेपाल भ्रमणलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको सम्भावित भ्रमणको पूर्वतयारीका रूपमा ... read more...
'ओली नेतृत्व सरकार आकाशे र उडन्ते गफमा ब्यस्त'
२०७६ भदौ २१ गते २०:०७
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले वर्तमान सरकार हावादारी प्रचारमा केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन् । डा. महतले वर्तमान सरकारले आकाशे र उडन्ते कुरा गरेर समय व्यतित गरिरहेको आरोप लगाएका हुन् । उनले भने,‘सरकारले पानीजहाज, रेल ल्याउने लगायतका हावादारी कुरा गरिरहेको छ । कहिले १५ हजार अट्ने सम्मेलन केन्द्र बनाउँछु भन्छ, कहिले के भन्छ ? कहिल ... read more...
'भातृसंस्थाहरुलाई सिमित र सुन्यमा राख्नु लाजमर्दोे विषय हो'
२०७६ भदौ २० गते ०८:५७
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले दोस्रो जनजागरण कार्य तालिका सार्वजनिक गरे लगत्तै नेपाल तरुण दलका महासचिव भूपेन्द्रजंग शाहीले भने पार्टीको उक्त कदमलाई खुलेर विरोध गरेका छन् । उनले पार्टी नेतृत्व जागरण कार्यक्रम लिएर जनतामाझ जानुअघि तरुण दल र नेविसंघजस्ता भातृ संगठनहरुलाई पूर्णता दिनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले भने,'भातृ संस्थाको केन्द्रीय समिति विस्तारसम्म गर्न नसक्ने गैरजिम्मेवार नेतृत्वबाट पार्टी जाग ... read more...